Waxay dacwad ka gudbiyeen Apple iyagoo ku andacoonaya in Apple Watch uu sababi karo dhaawacyo jireed | waxaan ka imid mac
Hadii aynu isku geyno fudaydka ay qaar ka mid ah u haystaan ​​in ay dacweeyaan shirkado waaweyn oo ay ku marmarsiyoonayaan in ay macaash ka helaan, ama ay si fudud u xayaysiiyaan qareenada hadii ay ku guulaystaan, iyo mushkilada caanka ah ee baytariyada kor u qaada Waqti ka dib Apple Watch, way fududahay in la qiyaaso natiijada wadarta.
Isticmaalayaasha Apple Watch qaarkood way dacweeyeen Apple isagoo ku andacoonaya in haddii batteriga Apple Watch uu bararo, natiijadu waxay sababi kartaa dhaawac jireed haddii aad xirato daawashada dhibaatadaas. Waxa aan ugu yeedhaa laablaabashadan.
Qof kastaa wuu yaqaanaa dhibaatada baytariyada bararsan ee aaladaha nooc kasta oo ay adeegsadaan. baytariyada lithium. Aniga qudhaydu dhawr maalmood ka hor ayaan ogaaday in iPad-kayga asalka ah ee aan si kalgacal badan u hayo, uu batarigu bararay, oo aan la isticmaali karin. Ceeb
Xaqiiqdu waxay tahay in Apple Watch, haddii dhibaatadani dhacdo oo batarigu bararo, isagoo shaashadda hoostiisa ku jira, waa daboolka ka fujiya, badanaa laba dhinac, oo dhinac laga soo qaaday. Oo haddii ay taasi dhacdo marka aad xirto gacantaada gacanta, waxaad isku gooyn kartaa cidhifka fiiqan ee shaashadda kor u kaca.
Xaqiiqdu waxay tahay, Chris Smith wuxuu lahaa Apple Watch Series 3 oo batari barar ah ayaa dhacay. Waxa uu arkay shaashadda oo ka siibtay batari barar ah saddex sano ka dib markii uu iibsaday. Waxa uu ku jiray gaadhi Golf ah oo uu ka soo degay isteerinka si uu u dhaqaajiyo, isaga oo aan ogayn in muraayadda Apple Watch-ka ku dhegan tahay ay kiiska ka go’day. Isla markaas shaashadda gooyay xidid cududda kale.
Dhibaatada baytariyada bararsan way adag tahay in la xalliyo.
Sidaas darteed wuxuu dacweeyay Apple dhaawacyada uu geystay, oo ay ku jiraan sawirro isku mid ah oo ka go'ay gacanta Smith. Waxa uu helay markhaatifurka dadka kale ee ay saamaysay bararka batteriga Apple Watch, inkasta oo aanay dhaawacyo soo gaadhin, iyo waxay gudbiyeen dacwad wada jir ah.
Ma ahan dacwadii ugu horeysay ee kiiska baytariyada bararsan
2019, waxaa horay u jirtay dacwad la mid ah (oo aan lahayn dhaawacyo la xaqiijiyay) oo ka dhan ah Apple dhaqamada ganacsi ee been abuurka ah iyo jebinta dammaanadda, oo soo bandhigaya doodo badan oo la mid ah dacwadda markan uu keenay Smith.
Waxay timid maxkamad iyo ayaa shaqada laga eryay dacwadaas gaarka ah, ee lagu xukumay in Apple Watch ciladiisu aanay sabab u ahayn baytariyada khaldan ama gudaha khaladka ah. Garsooruhu wuxuu oggolaaday dacwadda inay sii socoto iyadoo lagu salaynayo jebinta dammaanadda cad, laakiin dacwooduhu wuxuu ugu dambeyntii laalay dacwadda. Waan arki doonaa waxa ay tahay eeddan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Waxay dacwad ka gudbiyeen Apple iyagoo ku andacoonaya in Apple Watch uu sababi karo dhaawac jireed
Sida loo abuuro oo loo wadaago Shabakadda Wi-Fi-ga Mac aaladaha kale
NordPass ee Mac wuxuu ku darayaa xaqiijinta biometric